I-SOL/USD yooVimba-Funda ukuRhweba
I-Solana ifikelela kwiNgingqi ye-Oversold njengoko i-Altcoin yenza ukulungiswa okunzulu
USolana uwele phantsi kwe-87 yeedola
I-SOL/USD ifikelele kwindawo ethengisiweyo
Ixabiso langoku: $ 90.94
Intengo yeNtengiso: $ 46,528,296,188
Umthamo wokuThengisa: $ 4,555,783,625
Solana (SOL) Uhlalutyo lwexabiso ngoJanuwari 24, 2022
Ixabiso likaSolana (SOL). iye yawa kakhulu ukuya ngaphantsi kwe-87 yeedola njengoko i-altcoin yenza ukulungiswa okunzulu. Ixabiso le-crypto lilungiswe phezulu kodwa lijongene nokuchasana kwi-104 yeedola. Ukuba i-crypto ijongene nokuchasana kwi-104 yeedola, oko kuthetha ukuba uxinzelelo lokuthengisa luya kuphinda luqale phantsi. Okwangoku, i-altcoin iyaguquguquka phakathi kwe-$ 80 kunye ne-$ 104 yamanqanaba exabiso. I-crypto iya kuphinda iqalise ukuthambekela xa amanqanaba adibeneyo aphulwayo. Ngokomzekelo, ukuba iibhere ziyaphuka ngaphantsi kwe-80 yeedola, imarike iya kuhla iye kwi-68 yeedola ephantsi.
I-Solana ikwinqanaba le-23 le-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-cryptocurrency inzima kakhulu kummandla ogqithisiweyo. Oku kubonisa ukuba i-downtrend yangoku ifikelele ekuphelelweni kwe-bearish. I-SOL / i-USD ingaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imakethi ifikelele kwindawo ethengisiweyo yemarike. Ukususela kwi-29 kaDisemba, i-altcoin iye yarhweba kwindawo ethengisa kakhulu kwimarike. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50 yeentsuku ze-SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla.
I-Solana ihamba phantsi njengoko i-altcoin yenza ukulungiswa okunzulu. I-cryptocurrency ifikelele kwindawo ethengisiweyo kwaye kukho ithuba lokuguqulwa kwexabiso. Okwangoku, ngoDisemba 14 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Solana iya kuwela kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 79.34.
USolana ukwiSilungiso esisezantsi, uphinda aqale ngokuthengisa uxinzelelo
USolana ujongene nokugatywa kwi-156 yeedola eziphezulu
I-SOL/USD inokuhla ukuya kwi-131 yeedola ephantsi
Ixabiso langoku: $ 139.16
Intengo yeNtengiso: $ 71,139,011,270
Umthamo wokuThengisa: $ 1,403,658,472
Solana (SOL) Uhlalutyo lwexabiso ngoJanuwari 17, 2022
USolana (SOL) ixabiso lijongene nokulahlwa kwi-$ 156 njengoko i-altcoin iqala kwakhona ukuthengisa uxinzelelo . Ngomhla we-13 kaJanuwari, abathengi batyhalela i-altcoin phezulu kwi-156 yeedola kodwa bagxothwa. U-Solana wehla waya kwi-143 yeedola ephantsi kwaye walungisa phezulu ukuze aphinde avavanye i-$ 151 ephezulu. Namhlanje, uxinzelelo lokuthengisa luyaqhubeka. Imarike inokuhla ukuya kwi-130.00 yeedola ephantsi kwe-10 kaJanuwari.
I-SOL/USD _ Itshathi yosuku
I-Solana ikwinqanaba le-36 le-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-cryptocurrency ikwindawo ye-downtrend. Ibuyela emva kokukhatywa kwamva nje kwi-156 yeedola eziphezulu. I-altcoin ine-bearish crossover. Umgca we-21 weentsuku ze-SMA uwela ngaphantsi komgca we-50 weentsuku ze-SMA ebonisa umyalelo wokuthengisa. I-SOL / i-USD ingaphantsi kwe-20% uluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imakethi ifikelele kwindawo ethengisiweyo yemarike. Uxinzelelo lokuthengisa lunokuncipha. Imivalo yexabiso ye-crypto ingaphantsi kwe-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye ne-50-day SMA ebonisa ukunyuka okungaphezulu.
USolana ukwinyathelo eliya ezantsi njengoko ephinda eqala ukuthengisa uxinzelelo . I-crypto ilungiswe phezulu kodwa yagxothwa kwi-156 yeedola eziphezulu. I-crypto iwa emva kokuphuka ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo. Okwangoku, ngoDisemba 14 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-Solana iya kuwela kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 81.34.